analogiquenumerique [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/4/4f6329c99b78dec8c608545c0b128819.xhtml failed
Teo amin’ny sehatra haino aman-jery indrindra no tena niavahan’ny analogique sy ny numerique, raha nitady hikirakira sy hitahiry sary, feo ary sarimihetsika ny olombelona.
Ny “analogique” dia ireo izay miseho amin’ny endrika fizika, afaka aseho amina variable continue iray, izany hoe afaka maka sanda tsy hita isa. Ohatra amin’izany:
ny fandraisana ny feo, fanovana azy ho tension elektrika, fitahirizana azy anaty kasety magnetika; torak’izany koa ny sarimihetsika.
ny fangalana sary amin’ny pellicule, fanasana azy hipetraka ambony taratasy; anatin’izany ny fikirakirana sary amin’ny filalaovana optika sns hahazoana ireo karazana effets maro.
Ny tombon’ny analogique dia manakaiky indrindra ny tena izy (fidele). Ny maharatsy azy kosa dia:
sarotra tahirizina: sary mataho-drano, loko mety ho vasoka,
sarotra kirakiraina: feo mora mikasoaka, ...
miharatsy rehefa adika: haintsika rehetra ny kasety original sy dika
Ny “numerique” indray dia entina hilazana ireo izay miseho amin’ny filaharana isa 0 sy 1. Ny fikirakirana azy dia tsy maintsy amin’ny alalan’ny milina manao kajy, dia ny processeurmemoires. Ohatra:
ireo sary sy feo ary sarimihetsika rehetra mety ho hita anaty solosaina
ny haino aman-jery anaty CD
Ny tena tombon’ny numerique dia ny fahamoran’ny fandikana, ary misy fikirakirana tsy vita amin’ny analogique, fa lasa mety arakaraka ny programa omena ilay mpanakajy. Ireo rindrankajy moa izany eo amin’ny informatika. Ny tsininy kosa dia:
tsy mifanaraka tanteraka amin’ny tena izy. Ny fanovana ho numerique tsinona dia manao echantillonnage izany hoe maka ampahampahany amin’ilay signal analogique, refesina ny hamafiny mba hahazoana signal numerique. Noho izany tsy azo mitohy ilay izy, fa lasa mitsitapatapaka. Ny resolution dia hampisehoana ny fahatsaran’ny signal numerique azo eo: ambony izy rehefa matetika ny echantillonnage. Raha ambony tsara anefa ny resolution dia tsy voatsinjon’ny taova fandrenesan’ny olombelona ilay fitsitapatapahana.
mimbahan-toerana ny multimedia numerique. Ny fandrosoan’ireo teknolojia fitahirizana anefa mamafa io tsininy io. Hitantsika daholo ny kapila manjelatra, ny kapila henjana, ireo cartes memoires sns. Ankoatra izay koa ny teknolojian’ny famatrarana.
Noho izany amin’izao fotoana izao dia mirona mankany amin’ny numerique ny multimedia rehetra. Manana toerana manokana eo anivon’izany ny informatika.
analogiquenumerique.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43